"အာရုံစူးစိုက်မှု"နဲ့အတူ တရုတ်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ ရူးသွပ် ဖြတ်သန်းနေတဲ့ တိုကျိုအိုလံပစ်ပွဲ သတင်းအမှားတွေ - Pandaily
“ အာရုံစူးစိုက်မှု” နဲ့အတူ တရုတ်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ ရူးသွပ် ဖြတ်သန်းနေတဲ့ တိုကျိုအိုလံပစ်ပွဲ သတင်းအမှားတွေ
Categories: Culture ကိုGloria Li ဩဂုတ် 12, 2021 ဩဂုတ် 12, 2021 မှာ Posted
In recent years, the Chinese Internet has seen an alarming surge in fake news spurred by bloggers’ freewheeling competition for eyeballs. (Source: Ben Stansall/AFP)
Tags: ∗Weibo | 2020 Tokyo Olympics | bloggers | Chinese athletes | internet haters | olympics | social media
ကေနဒါႏိုင္ငံသား Kpop အဆိုေတာ္ ရီရီဗန္ကို အဓမၼျပဳက်င့္သည္ဟု စြပ္စြဲၿပီး ဖမ္းဆီးခံရ
ကိုPandaily Aug 17 Aug 17 မှာ Posted
တနင်္လာနေ့ညက ဘေဂျင်းမြို့ ချောင်ယန်ခရိုင်ဥပဒေအရာရှိက Kpop Star ဖြစ်သူ ဒေါ်ရီရီဗင်ကို ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ အတည်ပြုပါတယ်။
ေပက်င္းတြင္ မီးဖြားေပးမည့္ တတိယေျမာက္ကေလးမိဘမ်ား ရက္ ၃၀ မီးဖြားမည္
ကိုPandaily Aug5Aug5မှာ Posted
စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ေမလ ၃၁ ရက္တြင္ ေဘက်င္းျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး၌ မီးဖြားၿပီးေနာက္ တတိယေျမာက္ရင္ေသြးကို ရက္ေပါင္း ၃၀ ခံစားရမည္ျဖစ္ကာ မီးဖြားၿပီး ၁၅ ရက္အၾကာတြင္ မီးဖြားမည္ျဖစ္သည္။
တရုတ်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးများက ဖော်ထုတ်ပြသပေးခဲ့သော “Big/Xiaoji” အစီအစဉ်တွင် လုပ်ငန်းခွင်သုံး ချည်မျှင်များ
ကိုPandaily Jul 16 Jul 16 မှာ Posted
တရုတ်လုပ်သားသန်းပေါင်းများစွာဟာ ဆိုက်ဘာ၊ အချိန်ပို၊ အချိန်ပို အလုပ်ချိန်တွေ မလုပ်ကြသေးတာကြောင့် အဆုံးမသတ်နိုင်ဘဲ ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။
Dating Application: တရုတ္ျပည္ Z အစဥ္အဆက္ဘယ္မွာ စြဲမလဲ?
ကိုVivian Xu Jul 12 Jul 12 မှာ Posted
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်က အွန်လိုင်းလက်ဆင့်ကမ်း ပလက်ဖောင်းဟာ တရုတ်လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ကြိုဆိုမှုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။